27 October 2017 Volume :5 Issue :57
Abafundi bezokwelapha ngokwelula neziguli eklinikhi eMadadeni.
Iqembu labafundi beziqu zokwelapha ngokwelula bathokoze kakhulu kulandela abakuzuzile ngesikhathi beqeqeqshwa njengengxenye yohlelo i-Decentralised Clinical Training eMadadeni, budebuduze ne-Newcastle.
Abafundi; uNkz Shanice Basdeo, uMnu Zainub Mudhoo noNkz Londiwe Ndlovu bamatasa nokuqedela ukuqeqeshwa kwabo kwasemphakathini esibhedlela saseMadadeni, futhi bayingxenye yeqoqo lokuqala labafundi bezokwelapha ngokwelula ababambe iqhaza ohlelweni lwe-DCT.
‘Ngesikhathi sokuqeqeshwa kwethu kwasemphakathini senze ucwaningo olunzulu lokuhlonza izinkinga zezempilo emphakathini. Manje sizama ukusebenzisa ulwazi lwethu namakhono ukuze sibhekane nalezi zinselelo’, kusho u-Basdeo obethokoze kakhulu.
Abafundi bebegxile kakhulu ekugqugquzelweni kweViki Lezokwelapha Ngokwelulwa Kweqolo njengoba bebesebenza emphakathini amasonto amahlanu, ukuhlonza nokugqugquzela ezokwelapha ngokwelula emaphandleni nasemiphakathini jikelele kanye nokwenza umsebenzi wokulekelela abantu abakhubazekile emphakathini ukuze kwenziwe ngcono izinga labo lempilo.
‘Ukuze sigqugquzele lezi zinselelo sahlela umhlangano wokucobelelana ngolwazi esikoleni sabakhubazekile iBoma Sizwa lapho sasifundisa othisha, abasizi bothisha nabanakekela isikole ngokubaluleka kokunakekelwa kweqolo, ukuma komzimba ngendlela efanele nokuphakamisa izinto ngendlela efanele lokhu sasikwenza ngokusebenzisa izinsiza ezibonakalayo njengezithombe, amapheshana, nokukhombisa ngokwenza,’ kuchaza uMudhoo.
Leli qembu laba nelinye ithuba lokuxhumana nezethameli eziningi ngokuba semsakazweni womphakathi i-Newcastle Community Radio, lapho babekhuluma ngokunakekelwa kweqolo, uhlangothi/isithrokhi, ukuzivocavoca nokubaluleka kokunyakazisa umzimba.
‘Siphinde sagxila kakhulu ezisebenzini zasesibhedlela nonompilo ngokusungula inkambu yezokuzivocavoca lapho abahlengikazi, odokotela, abaphathi njll. bamenywa kanye ngesonto emnyangweni wezokwelapha ngokwelula ukuzobabamba iqhaza emakilasini okuzivocavoca ukuze benze ngcono isimo sabo sezempilo nesomzimba,’ kusho uNdlovu.
‘Ekuqaleni kwabukeka sengathi siphoswe emajukujukwini kungacangwanga ngokulungela kwethu ukwenza umsebenzi nokuzethemba ukuthi sizophumelela emsebenzini, akekho owayazi ukuthi lokhu kuzoba umsebenzi omkhulukazi esake sawenza ezimpilweni zethu,’ kuqhuba uNdlovu.
UBasdeo uthe, ‘Yize noma ezokwelapha ngokwelula kuwumsebenzi owenziwa ngqo, ukubaluleka kokugwema ngokuhlumelelisa kunomthelela omkhulu ikakhulukazi kulabo abasemiphakathini yasemaphandleni. Sibonga kakhulu ngokuba abafundi bokuqala ukuza emiphakathini efana nalona sizokwelekelela ngesiqeqeshwe ngakho njengoba sesifike esiphethweni sokuqeqeshwa kwethu.’
UMudhoo uthe, ‘Eminyakeni engiyithathile ukuze ngiphothule izifundo zami ngingasho ngokuzethemba ukuthi akukho esengike ngakwenza okufana nalokhu ngokwendlela engikuthokozele ngayo ukuba sesibhedlela eMadadeni.’
‘Umsebenzi we-DCT ngiwubone njengento ezoba umqansa ngenxo yokuthi ngishiye umndeni wami nendawo engiyijwayele kodwa kuthe uma ngifika endaweni ebesizosebenzela kuyo ngasibona isidingo samakhono namava ethu.’